Facebook Virus ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » ဖြေရှင်းနည်းများ » Facebook Virus ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ
By နေမင်းမောင်11:16 AM5 comments
အခုတစ်လော Facebook မှဝင်လာတဲ့ Malware ကတော်တော်လေး ကိုဒုက္ခပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကောင် ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ စက်မှာရှိတဲ့ဘယ် Antivirus မဆိုအလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး ဖြုတ်လို့တောင် မရတော့ပဲ အသစ်ပြန်တင်တာနဲ့ စက်က Restart ထိုးထိုး ကျသွားပြီးဘာမှကို လုပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်.. အခုအကို တစ်ယောက်ကလဲ မေးထဲတာနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကိုအောက် မှာပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေလဲ သတိထားစေချင်လို့ အဲ့ဒီအကိုပို့လိုက် Virus ၀င်လာပုံလေးကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကျနော်မသိတာလေးရှိလို့ မေးချင်လို့ ပါ....ခု ကျနော့စက်ထဲမှာ ဟိုနေ့ facebook က လင့် တခု ကိုသူငယ်ချင်း တယောက်က ပို့ ပေးလို့ဖွင့်လိုက်တာ yotube ထဲရောက်သွားတယ်။ ဒီထဲကလိုပဲ ( Facebook ထဲတွင်း သူငယ်ချင်းဆီကဖြစ်စေ မည်သည့်နေရာက ဖြစ်စေ အောက်ပါအတိုင်း ပေးပို့လာပါက မနှိပ်ကြရန်....... ၄င်းသည် virus ကဲ့သို့ အကယ်၍ နိပ်မိသွားပါကမိမိ စက်တစ်ခုခုဖြစ်သည် သာမကကျန်သော Facebook ထဲမှ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးကို သူအလိုလို Auto လိုက်ပို့ သွားမည်ဖြစ်သည်.......​ မနေ့ညက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ window auto shut down (သို့) restart ခဏခဏ ကျပါတယ် Antivirus တွေကိုပါ တစ်ခါထဲ သူက ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ antivirus လဲ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ window original 64 bit ပြန်တင်ရင်လဲ system ဖိုင် တစ်ခုကို virus ကစားလိုက်သောကြောင့် Error 0x80070570 တက်ပီးတော့ window ဆက်တင် လို့မရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Facebook မှ virus လာပုံက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ hi. how are you? Wanna laugh? :):) http://46.185.65.225/100000512​217469 အနီရောင် လင့်ကိုနှိပ် လိုက်တာနဲ့ youtube ကဲ့သို့သော စာမျက်နှာ အားရောက်သွားပီး သင့်ကို Latest FlashPlayer တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို နှိပ်မိပြီဆိုပါကသင့်စက်ကျွန်တော်ပြောထားသလိုဖြစ်မှာ သေချာ ပါတယ်။
phone win July 30, 2011 at 9:27 PM
ိအ၇မ်းကို တန်ဘိုးရှိတဲ့ post လေးပါ----
ကချင်လေး July 30, 2011 at 9:54 PM
ကျေးဇူးပဲဗျာ PDF ဒေါင်းသွားတယ်
soe lwin September 22, 2011 at 6:01 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ pdf file ကိုိ download
အကို ကျနော် PDF File တွေဒေါင်းလော့ဆွဲလို့မရဘူးအကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကို ပြောပေးပါအုံးနော်..လေးစားစွာဖြင့်..